Kordhinta xoojinta si looga fogaado saameynta daadadka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Isbedelka Cimilada, Daadadka
Andalus waxaa saameeyay daadad aad uxun sababtoo ah roobab culus oo daba dheeraaday maalmihii lasoo dhaafay. Sababtaas awgeed Dawladdu waxay ansixisay xoogaa isbeddelo ah oo ku yimid sharciga taas oo ogolaaneysa xoojinta awooda jawaab celinta daadadka.
Khatarta daadadka ayaa marba marka kasii dambeysa kasii daraysa saameynta ay leedahay isbedelka cimilada. Taasi waa sababta ay Dowladdu u hirgelinayso isbeddelo xagga sharciga ah.
Wareegto ayaa la ansixiyay si wax looga beddelo xeerarka Hantida Dadweynaha ee Haydarooliga iyo Qorsheynta Hydrological. Isbeddeladani waxay awood u yeelan doonaan inay caddeeyaan dhulka la isticmaalo ee meelaha ugu nugul daadadka si loo damaanad qaado badbaadada dadka iyo hantida. Intaa waxaa dheer, isbeddelada sharciga waxay suurtogal ka dhigayaan in la xoojiyo hirgelinta "Socodka deegaanka" tanina waxay awood u siin doontaa ku dhawaaqida cusub keydka biyaha.
Tallaabooyinkan waxaa loo qaaday si loo daboolo dalabaadka nalagu soo rogay Amarka Qaab-dhismeedka Biyaha iyo Qiimaynta Khatarta Daadka iyo Dardaaranka Maareynta. Waxqabadyada la qaaday waxaa ka mid ah in la garto isticmaalka iyo waxqabadyada u nugul daadadka. Wax ka beddelladan, meelahan waxay xoog u la qabsan doonaan saamaynta isbeddelka cimilada, maaddaama la ballaadhinayo qorsheyn ballaadhan oo mas'uul ah oo ballaadhan iyo qorsheyn magaalo.
Isbeddeladan waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo adkeysiga iyadoo sidan loo yareynayo u nuglaanta meelahaas ka hor dhacdooyinka daadka. Arrinta qulqulka bii'ada, isbeddelada lagu sameeyay xeerarka waxay ilaalinayaan dabeecadooda sharci ahaaneed "xaddidaadda isticmaalka biyaha ee nidaamyada dhiig-miirashada" waxayna qeexaysaa astaamaha lagu dammaanad qaadayo dayactirkooda, xakameyntooda iyo kormeerkoodaba.
Muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo tirada keyd-biyoodka ayaa ah in ay si gaar ah muhiim u yihiin in laga fogaado cadaadiska ka jira meelaha qaarkood iyo wasakhayn kara sahayda biyaha la cabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Kordhinta xoojinta si looga fogaado saameynta daadadka
Suudaan, waa dalkii ugu horreeyay ee aan lagu noolaan karin sababo la xiriira isbedelka cimilada